“In dalku wax soo saar iyo siduu isugu filaan lahaa uu gaadho diyaar ayaanu u nahay oo muhiimadda la siiyo”… C/raxmaan Saylici | SDWO.COM & SomalilandNews.net
“In dalku wax soo saar iyo siduu isugu filaan lahaa uu gaadho diyaar ayaanu u nahay oo muhiimadda la siiyo”… C/raxmaan Saylici
Published on January 12, 2018 by Khadar A Muse (Hargeisa Office) · No Comments
Hargaysa (SDWO): Madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland C/raxmaan C/laahi Ismaaciil (saylici), ayaa daboolka ka qaaday in xukuumadda cusub ay ka go’an tahay sidii dalku u gaadhi lahaa isku filaanshiyo dhinaca wax-soo-saarka gudaha ah.
C/raxmaan Saylici, waxa uu sheegay in ay muhiimadda kowaad siinayaan mid dhaqaale, mid aqooneed iyo miisaaniyadda dawladaba sidii loo dhiiri gelin lahaa wax-soo-saarka dalka, isla markaana loo fulin lahaa hawshaasi.
Madaxweyne ku-xigeenku, waxa uu sidan ka sheegay hadal uu shalay ka jeediyay gebagabadda shir muddo saddex maalmood ah xarunta wasaaradda horumarinta beeraha uga socday aqoon yahanada ku takhasusay arrimaha beeraha oo ay kaga arrinsanayeen sidii dalku u gaadhi lahaa isku filnaansho dhinaca cuntadda ah.
Waxaanu yidhi “In maanta dalku wax-soo-saarkii iyo siduu isugu filaan lahaa uu gaadho diyaar ayaanu u nahay. Siyaasadaan-na in aan fulino kolba itaalkeenu intuu ina gaadhsiiyo, oo maanta muhiimad gaara la siiyo wax-soo-saarka, haddii ay miisaaniyadda tahay, haddii ay fikir tahay iyo haddii ay dhaqaale tahay-ba, in aan hay’adaha wax-soo-saarka awoodda saarno, way naga go’an tahay”.
Isagoo hadalkiisa sii watayna waxa uu yidhi “Wax la taliyeyaal la yidhaahdo ayaa dalka ka abuurmay, taliyeyaasha la sheego ee wasaaradaha iyo madaxweynaha isku wada geeyoo, waxay noqotay wax qofka lagu yarro naas-nuujinayo uun.
La taliyihii rasmiga ahaa ee wax ina tarayay ama wasiirka ama madaxweynaha la taliyaha u ah, waa in uu noqdo nin wax ku kordhinaya. Laakiin imika waxay inaga noqotay, laba la taliye ama saddex la taliye oo wasiirku iska qoranayo, oo laba ilma-adeeradii ah, oo uu qaab cadaalad darro ah uu ku naas-nuujinayo”.
Shirkaasi oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda horumarinta beeraha waxaa ka soo qayb galay aqoon yahano dhinaca arrimaha beeraha ah iyo khubarro uu ka mid ahaa guddoomiyaha guddi-hoosaadka khayraadka dabiiciga ah ee golaha Wakiiladda xildhibaan Siciid Warsame Gaanni.
Waxaana gebagabadii kulankaasi laga soo saaray qodobo ay iskula qaateen dhinacayadaasi mudadii uu socday kaasoo la xidhiidhay waxyaaba u baahan in wax laga qabto qorshaha dhaw iyo qorshaha fog.
Sidoo kale Prof. Axmed Cilmi Geedi, oo ka mid ahaa aqoonyahamadii dhinaca beeraha ee kulankaasi ka qayb galay ayaa gebagabdii kulankaasi ka akhriyay qodobo laga soo saaray, waxaanu yidhi “In la sameeyo wacyigelin dhinac walba ah. In la asteeyo dhulka ku haboon wax-soo-saarka gobol walba oo dalka ka mid ah.
In wasaaradu dejiso, ansixiso qorshaha iyo nidaamka dhaw ee beerashadda.Dhamaan hay’adaha iyo cidda ku hawlan ka shaqaynta beeraha in ay raacaan qorshaha dhaw ee wax-soo-saarka, soona gudbiyaan qorshahoodda dhaw ee wax-qabadka ee sanadka.
Wasaaradda horumarinta beeruhu waa in ay ku lamaanaysaa hay’adaha qof ka socda wasaaradda beeraha. Waa in wasaaradu xoojiso xoojiso xiddhiidhka wada shaqaynta goboladda beeralayda, lanna xoojiyo awoodda xafiisyadda wasaaradda ee heer gobol iyo heer degmo. In la sameeyo biyo-joojin xoogan. In lagu dhiiri geliyo ganacsatadda meelgashiga wax-soo-saarka beeraha ah”.
Geesta kale wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Axmed Muumin Seed, ayaa ka waramay sidii loo gaadhi lahaa isku filnaansho cuntaddda ah, waxaanu ku dheeraaday muhiimada ay leedahay in wax lala soo baxo. “Dalkiibaynu haysanaa, dalkiibaynu haysanaa. Markaa maxaa inaga hortaagan in aynu dalkeena wax kala soo baxno. Khubaradan, oo isaga kala yimid goboladda dalka oo dhan markaanu kulamo badan samaynay oo gelinka dambe oo aanu wasaaradda ku shaqayno, waxay ka gayoon wayday inay khubaradani isku timaado” ayuu yidhi wasiir Seed.
Isagoo hadlakiisa sii watayna waxa uu yidhi “Waxaan dareemayaa oo aan ka wasaarad ahaan dareemayaa, shacabka Somaliland-na dareemayaan in wax soo saarka dalkeenu hooseeyo. Maxaa hooseysiiyey ayaa la is waydiiyay?, halka-na waxa ka soo baxay qodobo dhawr ah oo qaar-na ay ahaayeen qaar yaalay, qaar cusubi-na way ku jiraan.
Wasaaradda waxa jooga dad wanaagsan oo u baahan in laga shaqaysiiyo, inta wasaaradda dibada ka joogtay-na noqon mayso. Waxaananu isku dayi doonaa in aanu kulamada noocan oo kale ah xoojin doono bile-na ka dhigno”.
Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Maxamed Cilmi Aadan, oo isna xidhitaanka shirkaasi hadal ka jeediyey ayaa tilmaamay sida ay lagama maarmaanka u tahay in lagu dedaallo sidii xooga loo saari lahaa wax soo saarka gudaha, isla markaana looga shaqaysiin lahaa dadka aqoonta u leh arrimaha beeraha.